Waxay cadeynta covid-ku dhib yareynaysaa safarka • E-hälsomyndigheten
Tjänster Covidbevis About Digital COVID Certificate in other languages Waxay cadeynta covid-ku dhib yareynaysaa safarka
Waxay cadeynta covid-ku dhib yareynaysaa safarka
Cadeynta covid-ka ee Midowga Yurub (hore lo odhan jiray Cadeynta Cagaaran) waa adeeg soosocda oo elektaroonig ah oo bilaash ah kaas oo aad ka heli doonto cadeyn in covid -19 lagaa tallaalay. Waxa cadeynta covid-ka la furi doono 1 Luulyo. Ugu danbeyn bilowga bisha Ogosto ayay sidoo kale suurtogal tahay in iyadoo adeega Cadeynta covid-19 la soo maraayo la heli karo cadeyn ku saabsan tijaabada covid-19 iyo cadeynta in jirada laga bogsadey muujineysa.
Afar tallaabo oo la qaadaayo si aad laga bilaabo 1 luulyo
ugu hesho cadeyntaada dhijitaalka ah
Halkan ayay ku yaalaan tallaabooyinka kala duwan ee ka hor intaad cadeyntaada dhijitaalka ah ku helin moobaylkaaga, kombiyuutarkaaga ama tablet-kaaga.
Is tallaal. Toddoba maalmood gudahood ayaa tallaalka lagu soo wargalinayaa Diiwaanka tallaalka ee qaranka (Nationella vaccinationsregistret).
Aqoonsigaaga dhijitaalka ah ku soo gal bogga www.covidbevis.se (la furaayo 1 Luulyo)
Soo qaado, daabac ama keydso adiga cadeynta tallaalka. Waxaad sidoo kale caddaynta loo dirayaa sanduuqaaga dhijitaalka ah, haddii aad mid leedahay.
Ay diyaar tahay in la isticmaalo. Xasuusnow inaad baaritaan ku sameyso xeerarka khuseeya meesha aad u safrayso.
Waxay qaadaneysaa dhowr maalmood (ugu badnaan todoba maalmood) tallaalka ka daba ka hor intaad cadeynta tallaalka qaadan karto. Waxay taasi ku xiran tahay qofka tallaalka qaadayaa sida uu wakhti u helo uu macluumaadka ugu galinaayo Diiwaanka tallaalka ee qaranka.
Fududeynaaya safarada Yurub
Waa inay Cadeynta covid-ka ee dijitaalka ahi ay fududeyso safarada Yurub gudahooda inta cudurka aafada ee Korona lagu jiro maadaama oo Yurub oo dhan loo qaabeeyey isla si.
Waxay Cadeynta covid-ka ee dhijitaalka ahi ku siineysaa inaad si fudud ugu tusto inaad haysato:
lagaa qaadey tijaabo muujineysa inaan lagaa helin, ama
aad ka bogsatay covid-19 (waxa loola jeedaa in tijaabo lagaa qaadey ay muujisay inaad cudurka qabto, ee aan aheyn tijaabada lagu eegaayo difaaca jidhka)
Xasuusnow inu yahay waddanka aad u safreyso cida go’aaminaysa sharciyada halkaas ka shaqeynaaya. Waa adiga masuuliyadaada inaad eegto inaad shuruudaha gelitaanka buuxineyso.
Hey'ada E-hälsomyndigheten ayaa masuul ka ah adeega elektarooniga ah ee Cadeynta covid-ka iyadoo cadeynta bixineysa. Waxay hey'adu dawladu qorsheyneysaa in adeegga elektarooniga ah ee Cadeynta covid-ka la furo 1 Luulyo. Waxa uu adeegga elektarooniga ah ku saleysan yahay sharciyada Midowga Yurub ee ku saabsan Cadeynta covid-ka ee Midowga Yurub.
Waxa bilowgaba adeega elektarooniga ah ee Cadeynta covid-ka kaliya ku jira cadeyn tallaalka covid-19. Toddoba maalmood gudahood ka dib markaad tallaalkaaga qaadato ayay tahay in Diiwaanka tallaalka ee qaranka la soo wargeliyo, iyadoo aad markaas soo qaadan karto Cadeyntaada covid-ka Waxaad u baahan tahay inaad aqoonis Iswiidhis ah oo elektaroonig ah haysato si aad adeega elektarooniga ah uga soo gasho.
Qofka aan haysan, ama aan isticmaali karin, aqoonsiga elektarooniga ah ee shahaadada tallaalka ah doonaaya ayaa halkii uu ka isticmaali lahaa adeegga elektarooniga ah uu awoodaa inuu Cadeyntiisa covid ka loogu soo diro cinwaanka dadweynaha ee uu ka diiwaangashan yahay. Foomka ogolaanshaha ayaa 1 Luulyo laga heli doonaa bogga internetka ee hey'ada E-hälsomyndigheten.
Wadamada qaar ayaa ogolaan soo gelitaanka ogolaan doona ka dib marka hal daws ama hal cirbad la qaato. Waxay Utrikesdepartementet (UD) cusbooneysiiyey macluumaad ku sameysay xeerarka shaqeynaaya safarada lagu aadaayo wadamada kala duwan. Waxaad linkiga macluumaadku ku jiro ka helaysaa halkan.
Maxay cadeynta tallaalku micnaheedu tahay?
Adiga cadeyntaada tallaalka ayay micnaheedu taahay.
magacaaga iyo taariikhda dhalashadaada, taariikhda la bixiyey,
macluumaad ku saabsan adiga tallaalkaaga iyo goorta aad qaadatay
id-ga shahaado oo gaar ah.
Waxa macluumaadka tallaalka ku saabsan loo soo gudbinayaa Diiwaanka tallaalka ee qaranka (Nationella vaccinationsregistret ama NVR) iyadoona lagu keydinaayo Folkhälsomyndigheten.
Ka fikir waxay qaadanaysaa dhowr maalmood (ugu badnaan todoba maalmood) tallaalka ka dib ka hor intaad cadeyntaada tallaalka qaadan karto. Waxay taasi ku xiran tahay sida qofka tallaalka qaadayaa uu wakhti macluumaadka uu ku galiyo Diiwaanka tallaalka ee qaranka ugu helo.
Sii wadista horumarinta Cadeynta covid-ka
Nooca ugu horeeya ee Cadeynta Covid-ka waxa kaliya ku jira cadeyn muujinaysa in covid-19 laaga tallaalay. Waxay E-hälsomyndigheten ka shaqeynaysaa inay xitaa soo saarto cadeyn tijaabo muujineysa inaan lagaa helin covid ‑19‑ iyo cadeyn in laga bogsaday jirada ay ka qeyb noqoto.